Ayigwemile iCorona azobhekana kowamanqamu weCurrie Cup - Impempe
Ayigwemile iCorona azobhekana kowamanqamu weCurrie Cup
January 27, 2021 Impempe.com
Konke kuqondile! Lawa ngamazwi ashiwo yisikhulu esiphezulu seCell C Sharks, u-Ed Coetzee, kulandela ukuvela kwezindaba zokuthi akekho noyedwa umdlali kumbe owethimba labaqeqeshi otholakale ene-Covid-19.
UCoetzee uwasho la mazwi ngaphambi kwendumezulu yomdlalo wamanqamu weCarling Currie Cup phakathi kweSharks neVodacom Bulls eLoftus Versveld ngoMgqibelo.
Ngo-7 ekuseni ngoLwesibili bonke abadlali, nethimba labaqeqeshi beSharks, bahlolelwe i-Covid-19 kwase kumele balinde amahora angu-12 ukuzwa imiphumela.
“NgoLwesithathu ekuseni sithole imiphumela ethi konke kuqondile. Akekho noyedwa osalayo,” kusho uCoetzee.
Ngenxa ye-Covid-19, iSharks ibe ngelinye lamaqembu ashayeka kakhulu kule sizini yeCurrie Cup.
Kunemidlalo eminingi okuphoqe ukuthi ihlehliswe ngoba kubonakala ukuthi (iSharks) ngeke ikwazi ukuyidlala ngenxa yokuthi ixega kakhulu kubadlali nakubaqeqeshi imbala.
Kunesikhathi lapho kuphoqe khona ukuthi iSharks ingadlali kufanele iye eKapa lapho kutholakale khona ukuthi abadlali abangu-22 bane-Covid-19.
Kusobala ukuthi lukhona ushintsho olwenziwe kwiSharks ngendlela yokuziphatha kubadlali ngoba nangeledlule beya kwiDHL Western Province bekungekho noyedwa umdlali onogcobho, njengoba sebekuphinda futhi lokhu oShaka nakule mpelasonto.
Ezimnandi zithi nasekhempini yeBulls bonke abadlali batholakale bemsulwa kwi-Covid-19, ngakho isiyohlangana khona eLoftus ngoMgqibelo ntambama.
Ekhuluma esithangamini nabezindaba, uJake White, opheka iBulls uxwayise iSharks sakuyisongela ukuthi uma izoza ngale ndlela yayo yejubane izozisola njenge-Emirates Lions.
“Nakanjani umdlalo uzoba nzima. Ngaphambi kwe-lockdown iSharks ibidlala umbhoxo sonke esifisa ukuwudlala.
“Indlela yayo yokudlala iyaheha kodwa uma bezoa ngayo kithina bazohlangana nezimbila zithutha njengoba kwenzekile kwiLions,” kusho uWhite.
Previous Previous post: Lihoxisiwe icala lokushaya ebelibekwe isilomo sePirates uLorch
Next Next post: Akananxa neCeltic engamsayinanga uMokhele weChippa